Maraykanka:-Khilaafka Rooble iyo Farmaajo waxa uu halis ku yahay geedi socodka doorashooyinka. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Maraykanka:-Khilaafka Rooble iyo Farmaajo waxa uu halis ku yahay geedi socodka doorashooyinka.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha mudo –xileedkiisa dastuuriga ah uu dhamaaday February 2021 iyo Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ‘hilis’ ku yahay geedi socodka doorashooyinka wadanka oo markii horaba dib u dhacay.
Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibada Maraykanka ayaa lagu sheegay “in wadashaqaynta madaxda Soomaalida – gaar ahaan Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble – ay tahay lama huraan si loo hubiyo in dalku si degdeg ah ugu soo dhammaystiro geeddi -socodka doorashooyinka oo markii horaba dib u dhacay.
“Khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Rooble ayaa halis ku ah geeddi –socodka doorashooyinka waxaana u baahanahay in si degdeg ah oo nabad ah lagu xaliyo” ayaa lagu xusay qoraalka.
“Maraykanku wuxuu soo dhaweynayaa sida ay labada dhinac uga go’an tahay geeddi -socodka doorashada laakiin wuxuu weli ka welwelsan yahay in doorashooyinkan ay mar hore dib uga dhaceen xilligii loo qorsheeyay” ayaa lagu yiri qayb ka mid ah qoraalka.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in dib-u-dhac kaste oo ku yimaada doorashooyinka dalka uu sii kordhin doono suurtagalnimada rabshado dalka ka dhaca ay horseedi doonto in Al-Shabaab iyo dagaalyahanada kale ee hubaysan ay abaabulaan weeraro ka dhan ah Dowladda.
“Anagoo ka duulayna danta aan wadaagno si aan u hubinno in geeddi -socodka doorashooyinku hore u socdaan, waxaan ugu baaqaynaa Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha in ay ka fogaadaan hadallada ama ficillada sii kicinaya iyo in ay si nabad ah ku xalliyaan khilaafkooda salka ku haaya magacaabista iyo xil ka qaadista saraakiisha amaanka.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Wasaaradda arrimaha dibada Maraykanka ayaa hadalkeeda ku soo xirtay In si degdeg ah loo soo dhammeystiro geeddi-socodka doorashada si ay gacan ka geysan doonto horumarinta ajandaha la-dagaallanka kooxaha loogu yeero argagaxisada.
Khilaafka madaxda dowladda Soomaaliya ayaa sii xoogeystay ka dib markii madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay in uu awoodda Ra’iisul Wasaaraha laalay, taas oo Rooble uu diiday.
Khilaafka iyo muranka ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo horey uga tirsaneyd hay’adda nabad sugidda Soomaaliya oo dowladda sheegtay in Shabaab ay dishay kadib in muddo ah la la’aa. Shabaabka ayaa haseeyeeshee beeniyay.
Previous articleAgaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin oo Muqdisho dib ugu soo laabtay.
Next articleMahdi Guuleed oo ka haray doorashada aqalka sare ee goboladda Waqooyi.